Vana Vanofanira Kudzidziswa—Kushanda Nesimba
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mbunda Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngangela Norwegian Nyaneka Nyungwe Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tshwa Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
KUSHANDA NESIMBA KUNOSANGANISIREI?
Vanhu vanoshanda nesimba vanovimbwa navo. Pavanopiwa basa, vanoriita uye vanoripedza nenguva.
Kunyange vachiri vadiki, vana vanogona kutodzidza kushanda nesimba. “Mwana paanenge ava nemwedzi 15 anenge ava kukwanisa kuita zvaanonzi aite nemubereki. Paanenge ava nemwedzi 18 anenge ava kuda kuita chero zvinenge zvichiitwa nevabereki vake,” rinodaro bhuku rinonzi Parenting Without Borders. “Munyika dzakawanda vana pavanenge vari pakati pemakore 5 ne7, vabereki vanotanga kuvadzidzisa mabasa epamba. Zvisinei nekuti vachiri vadiki, vanotokwanisa kuita mabasa acho.”
NEI KUSHANDA NESIMBA KUCHIKOSHA?
Mune dzimwe nzvimbo, vechidiki vati kurei vanobva pamba vachinogara vega, asi vanoomerwa nazvo vobva vadzokera kuvabereki. Chinonyanya kuita kuti zvidaro ndechekuti vana vacho vanenge vasina kudzidziswa kushandisa mari zvakanaka, kuita mabasa epamba, kana kuzvitsvagira zvekurarama nazvo.
Saka zvakanaka kugara madzidzisa vana venyu kushanda nesimba kuitira pavanozokura. “Hamufaniri kungoramba muchivaitira zvese, mobva mazongovati vachizviraramira vega pavanosvitsa makore 18,” rinodaro bhuku rinonzi How to Raise an Adult.
Vapei mabasa ekuita pamba.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Kushanda zvakaoma kwese kune zvakunobatsira.”​—Zvirevo 14:23.
Vana vanoda kushanda nevabereki vavo. Saka shandisai mukana iwoyo kuti muvape mabasa ekuita pamba.
Vamwe vabereki vanozeza kupa vana mabasa epamba. Vanenge vachiti vana vavo vachiri kuenda kuchikoro vane homuweki yakawanda, saka havadi kuvaremedza nebasa repamba.
Asi vana vanoita mabasa pamba vanowanzogona kuchikoro, nekuti mabasa iwayo anovadzidzisa kuita basa ravanenge vanzi vaite nevadzidzisi. Bhuku rambotaurwa rinonzi Parenting Without Borders rinoti, “kana tikasabvuma kubatsirwa nevana vedu vachiri vadiki, vanogona kufunga kuti kubatsira vamwe hakukoshi . . . Vanenge vava kutotarisira kuti vachaitirwa zvese nevamwe.”
Saka kuita mabasa epamba kunobatsira vana kuti vadzidze kubatsira vamwe pane kungofunga zvakavanakira. Mabasa epamba anoita kuti vana vaone kuti vanokosha mumhuri, uye vanoona mabasa acho sezvinhu zvavanofanira kuita.
Batsirai vana venyu kubvuma kana vakakanganisa.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Teerera zano uye bvuma kurayirwa, kuti uve akachenjera mune ramangwana.”​—Zvirevo 19:20.
Ngatitii mwana wenyu apwanya chinhu chemumwe munhu netsaona. Hamufaniri kuvanza zvaitika. Anofanira kutobvuma mhosva yake uye dzimwe nguva kutotenga chinhu chacho.
Kana mwana achiziva kuti anokanganisa achadzidza
kutaura chokwadi uye kubvuma kana akanganisa
kusapa vamwe mhosva
Vana vanodzidziswa kushanda nesimba, havazonyanyi kunetseka muupenyu pavanenge vakura
Ndiri munhu anoshanda nesimba, akarongeka, uye anobata nguva here?
Vana vangu vanondiona ndichiita mabasa epamba here?
Pandinokanganisa ndinobvuma here, kana kutokumbira ruregerero?
“Kubvira vachiri vadiki, vana vangu vaindibatsira kubika, kupeta hembe dzinenge dzawachwa nekutsvaira mumba. Vakatanga kunakidzwa nekuita basa, uye vainakidzwa nekushanda neni. Zvaitovadzidzisa kuita mabasa.”​—Laura.
“Rimwe zuva ndakaudza mwanakomana wangu kuti afonere imwe shamwari yedu achikumbira ruregerero pane zvaakanga aita. Kubvira ipapo haaregi kukumbira ruregerero paanotaura mashoko anorwadzisa vamwe. Zvakatomudzidzisa kukumbira ruregerero pese paanokanganisa.”​—Debra.
KUDZIDZA KUBVA PAZVIKANGANISO
“Vana pavanokanganisa, zvakakosha kuti vabereki vayeuke kuti vana vane zvavanodzidza pazvikanganiso zvavo,” anodaro mumwe mudzidzisi anonzi Jessica Lahey, mune imwe magazini inonzi Atlantic. Anowedzera kuti: “Pavana vandinodzidzisa gore negore, vana vanonyanya kufara uye kubudirira kupfuura vamwe ndevaya vane vabereki vanovarega vachidzidza kubva pane zvavanokanganisa. Pane kuvadzivirira, vanovabatsira kuti vangagadzirisa sei zvavanokanganisa. Vana vanoitirwa izvi, vanofara uye vanobudirira muupenyu.”
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Nhamba 2 2019 | Zvinhu 6 Zvinofanira Kudzidziswa Vana
Nhamba 2 2019 | Zvinhu 6 Zvinofanira Kudzidziswa Vana
MUKAI! Nhamba 2 2019 | Zvinhu 6 Zvinofanira Kudzidziswa Vana
Rongedza Zvinhu Zvako